Olee otú Mepụta Your Video n'ihu si PowerPoint Files
Wondershare DemoCreator Bụ ike ihuenyo edekọ na dere gị na-ihuenyo eme na site gbara ọkpụrụkpụ ngosi fim. Na DemoCreator, ọ dị mfe maka gị ike kenkwukorita n'ihu, software anwale, Nkuzi na ngwaahịa demonstrations.
Biko-eso nke a Walkthrough ndu idekọ gị ngosi na DemoCreator.
Record | Dezie | Asuanetop
1. Malite Wondershare DemoCreator. Ozugbo oghe, pịa New Record, ma ọ bụ pịa Record bọtịnụ na toolbar.
2. Họrọ ndekọ ebe site na ịpị na dọlite ​​green rektangulu. Ị nwere ike ịgbanwe ka Full ihuenyo ndekọ ma ọ bụ kpatụ ndekọ ebe dabara akpan akpan ngwa window na dobe ala menu.
3. Wondershare DemoCreator awade atọ ndekọ ụdịdị. Full Motion ike idekọ niile mgbanwe na ihuenyo. Ihuenyo Shot ike weghara na ihuenyo ọrụ dabere na òké clicks na keystrokes. Na Manual ndekọ mode, i nwere ike iri screenshots site na ịpị F7 mgbe ndekọ.
4. Pịa Audio wedaa akụ iji họrọ audio ego ị na-aga ka ịdekọ si. Iji nwalee audio, pịa na Audio akara imeghe ọnọdụ menu.
5. Mgbe ị dị njikere, pịa red rec button ka ịmalite ndekọ. A ga-enwe 3-abụọ ngụda nke na-eme ezi nkwadebe tupu ndekọ.
6. Ka ịkwụsị ndekọ pịa F10 na keyboard, ma ọ bụ abụọ click na DemoCreator na akara ngosi na ọrụ mmanya.
7. Mgbe ị kwụsị gị ndekọ, a window emepe ma ị nwere ike ihuchalu gị demo, dezie gị ndekọ, ma ọ bụ chekwaa oru ngo, ma ọ bụ na-emepụta gị ngosi dị ka video.
Nke a nzọụkwụ bụ ịnara na ike ga-ọsọsọp. Ị nwere ike bulie ụfọdụ isi nke na ị chọrọ ịmata dezie gị ngosi. Ma ọ bụ i nwere ike dị nnọọ aga ka ịhụchalụ na-ebipụta gị ngosi nkiri.
Ị nwere ike tinye ụfọdụ kenkwukorita shapes na akpọkwa na icho mma nke ngosi. Họrọ ihe si "N'iji" taabụ, ise ya site na-adọkpụpụta òké na idaha panel. YYou nwere ike tinye ederede, bugharia 90 ogo, mgbanwe ịke, setịpụrụ edinam na ndị ọzọ maka ihe.
Tinye Flash Animation
Pịa Flash button ma họrọ Flash na-aga aga na menu, ị nwere ike mbubata gị Flash na-aga aga (.swf) site na kọmputa gị site na ịpị "Ọzọ" button.
Mbubata oyiyi ma ọ bụ na-eji ihe osise Foto dị Library, pịa Image bọtịnụ na họrọ Nhọrọ si dobe ala menu. I nwekwara ike fanye weghaara foto na ugbu a na ihuenyo kpọmkwem site na ị na-ahọrọ Capture Image.
Tinye Animation ka ihe
Na DemoCreator 3.5 i nwere ike tinye na-aga aga maka họrọ akpọkwa na-aga aga mkpado. Họrọ otu ihe wee pịa na-aga aga na akara ngosi na họrọ otu mmetụta. Ịnwere ike ihuchalu na-aga aga mgbe imecha.
Ị nwere ike mesie mkpa nzọụkwụ ma ọ bụ ọdịnaya site na-agbakwụnye Zoom mmetụta. Pịa na bia bọtịnụ na Home taabụ, ị pụrụ ịhụ a red etiti ebe nke a ga-ebupụtara na. Ị nwere ike hazie ọnọdụ, na ọnụ ọgụgụ na oge nke ahọrọ mbugharị eku.
Pịa Sound bọtịnụ na Home taabụ na-emeghe Audio Editor. Ịnwere ike idekọ, mbubata, ogbi na ewepụtụ akomako ma ọ bụ ụda.
E nwere ọtụtụ formats gụnyere Flash nkiri na dị iche iche video formats ị nwere ike họrọ n'ihi na ị na-ekwusara. Họrọ otu na dabara gị mkpa ma na-eso gị na ihuenyo ndekọ na ndị ọzọ.
1. Pịa Asuanetop bọtịnụ na Home taabụ ka ịhụchalụ gị video. Ọ bụrụ na ị afọ ojuju na ya, pịa format na ị chọrọ ebipụta. Flash nkiri (.swf) bụ na-atụ aro formats na ike òkè na otutu nchọgharị.
2. Họrọ otu mmepụta format na dobe ala menu. Ma i nwere ike ịgbanwe akụkụ maka mmepụta nkiri.
3. Pịa OK na-amalite na-ejere gị video na-azọpụta gị oru ngo. Ijere oge dịgasị na-adabere na video n'ogologo, mmepụta format, kọmputa ngwaike, wdg
4. Mgbe video Rendering bụ okokụre, họrọ "Ele ngosi nkiri" ka ihuchalu ma ọ bụ họrọ "Open mmepụta nchekwa" na-elele video faịlụ.